Tonizia: Krizin’ny mpitsoa-ponenana ao an-tsisintanin’i Libya · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2011 7:16 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Deutsch, Français, русский, Português, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Ny sisintany misy eo amin'i Tonizia sy i Libya dia nahatazanana ny firohotry ny mpitsoa-ponenana maro be hatramin’ ny nisian'ny fitroarana tao Lybia. Sady lava no sarotra ny dia mamonjy sisintany, ary ho ny ankamaroany dia tsy mbola tsy mifarana eo ny fahasarotana. Vahoaka marobe aman-jatony no niandry sady niaritra ny andro mangatsiaka mba hiampita hankao Tonizia. Maherin'ny 75000 ny olona nandositra ny herisetra tao Lybia mba ho any Tonizia, nanomboka ny 20 febroary, ary mbola maro ireo ho avy. Ny toe-draharaha ao amin'ny sisintany Libya-Tonizia dia miditra ao anatin'ny krizy miantraika lalina amin'ny mahaolona, hoy ny UNHCR.
Nalefan'i IFRC ao Ras Jdir ity horonan-tsary ity tamin'ny 1 martsa.
Maro tamin'ny mpitsoa-ponenana tafahitsoka eo amin'ny amin'ny toeram-piampitàna Ras Jdir any Tonizia no Ejypsiana nipetraka tao Libya. Manaramaso akaiky ny zava-nitranga any an-tsisintany ny mpiray tanindrazana ao Ejipta.
Nampirisika ireo Ejipsiana mba hanery ny governemantany hamerina ireo izay mbola tafahitsoka eo am-piampitàna ao Ras Jedir i Hani Mohammed (@palestinoo7) :
Ejipsiana an'arivony tao amin'ny sisintany fiampitàna Ras Jdir, tao Ben Guerden, ao Tonizia, no miantsoantso vonjy. Azafady, alefaso ity hafatra ity ho an'ny governemanta Egypsiana. Miharatsy ny toedraharaha aty ary atahorana ny hisian'ny krizy ara-tsakafo.
Shady Al-Mahmoudi(@ShadyAlmahmoudi) ni-tweet:
Niresaka momba ny fandosiran'ny Ejipsiana an'i Gadhafi ny namana Toniziana, noho ny krizy ara-tsakafo ao Ras Jdir… ary nihoatra amin'ny tokony izy ny hamaroany.
Wael Ghonim, lohandohan'ny mpanohitra Egyptiana, (@Ghonim)ni-tweet:
Misaotra ry rahalahy sy ranabavy Toniziana noho ny fandraisanareo ny namana Ejipsiana. Nampiseho firaisan-kina taminy ianareo noho ny tsy firarahian'ny governemanta!
Sarintanin i Libya, Tonizia, Ejipta
Ny fiantsona hamonjy ireo mpitsoa-ponenana ao Ras Jdir dia niparitaka tamin'ny fampitam-baovao,sy ny fampielezan-kevitra amin'ny fanangonana fanampiana .
Niantso ny ONG iraisam-pirenena i Hamdi Kadri(@hamdi_kadri)mba hijery ny fandehan'ny toe-draharaha:
Antso ho an'ireo ONG eran'izao tontolo izao : miharatsy ny toe-draharaha ao amin'ny sisintany manasaraka an'i Tonizia sy i Libya. Antso ho amin'ny fanampiana!
HHassine(@HBHassine) ni- tweet:
Fotoana ampisehoana firaisan-kina, hatsaram-panahy, ary fandraisana andraikitra izao: ao Ras Jdir, vahoaka an-jatony no mila vonjy. Vonjeo izy ireo!
Zied Mhirsi,(@zizoo), dokotera Toniziana nanolo-tena hanampy ireo Libyana izay nandositra ny herisetra:
Mila olona indrindra izahay mba handamina ireo olona an'arivony. Mahafoiza fotoana hankanesana ao Ras Jedir
Niangavy ny tafika Toniziana koa izy mba hanampy azy ireo:
Nanao asa tsara ny tafika Toniziana. Gaga ny firenena mikambana.
Manahy ny hafa noho ny firongatry ny mpitsoa-ponenana sao manohintohina ny tombotsoan'i Tonizia mandritra ny tetezamita mbola marefo hatramin'ny nandosiran'ny Filoha Ben Ali.
Mathieu von Rohr solontenan'ny DER SPEIGEL(@mathieuvonrohr) amin'ny raharaham-bahiny:
Ny krizin'ny mpitsoam-ponenana ao Ras jdir dia lasa rahona hafa mitatao amin'i Tonizia – ilaina maika ny fanampian'izao tontolo izao.